Rfid Wristbands, Smart Makadhi, Rfid Matagi - Chuangxinji
ACR3901U-S1 ACS Yakachengeteka Makaroti Ekubata Kadhi R ...
Yakagadzwa muna 2001 gore, Shenzhen Chuangxinji smart kadhi co., Ltd yaive nyanzvi mukugadzira
uye kushambadzira kwePV kadhi, RFID kadhi, NFC rundarira uye RFID Tag nezvimwewo.
Mune matatu matatu emazuva ano uye akakwirira emuchina wekugadzira mutsara:
Kanyanga kugadzirwa mutsetse pamwe pamwedzi goho zviuru makumi maviri.000 zvidimbu makadhi: rwakapetwa kumonera michina yekudhinda, ichiumbiridza michina, michina yekukukurwa uye nekunyora.
Tine vashandi vekutengesa 6 vanotaura Chirungu, Germany, Furanzi, ChiSpanish, ChiArabic uye zvichingodaro, bhizinesi redu rinotangira kubva kuEurope, America, Oceania, Africa, Asia uye nyika dzekumabvazuva nekumatunhu.
Idzi ndidzo dzimwe nhau dzichangobva kuitika kubva kukambani yedu. Tichagadzirisa dzimwe nhau dzekambani, zvinyorwa zveindasitiri, uye zvinyorwa zvekucheka -mukati meiyi module nguva nenguva ... Tinofara kugovana izvi zvikamu newe, tinovimba unozvifarira
Machira ekuwachisa anogadzirwa neyakagadzikana uye ari nyore ePPS zvinhu. Ichi chinyorwa chakakwirira-kuomarara crystalli ...
RFID yemagetsi tag ndeye isiri-yekudyidzana otomatiki kuzivikanwa tekinoroji. Iyo inoshandisa radio frequency frequency kuratidza ...
Iyo yechinyakare inotonhora cheni logistics uye yekuchengetera logistics monitors haina kunyatso kujeka, uye vanotakura ...
NFC emagetsi masherufu zvinyorwa zvinoshanda kune Wal-Mart, China Zviwanikwa Vanguard, Rainbow, zvimwe zvitoro zvakakura uye larg ...